I-SurSur bed and breakfast on wheels - isibaya sezimbuzi
Güssing, Burgenland, i-Austria
Ikamelo e-inqolobane ibungazwe ngu-Gertraud
IMPESHENI YABUSASA EMASONTWENI
Igumbi lezivakashi elihle esibayeni esidala sembuzi. Kunamanye amagumbi ezivakashi endaweni yethu: Izinqola ezimibalabala zomelusi. Futhi lokho endaweni enhle yemvelo ekumema ukuthi uphumule futhi ujabulele.
I-SURSUR - BREAKFAST BOARD ON WELS
Phila ngokugcwala kobulula
Indlu nesitebele kwalungiswa yithina ngokuzinikela okukhulu nokudala, ngaphandle kokulahlekelwa okwangempela ngakho sakha ikhaya elisha.
Kwasicacela ukuthi singathanda ukwabelana nabanye ngalesi siqeshana somhlaba esihle, ngakho uRolf wakha izindlu ezincane kuma-trailer asensimini amadala. Amasondo amadala okhuni ayesesesitebeleni aba inqola emboziwe futhi indlu yethu yokugezela yadalwa ngenqola yamapulangwe engasasetshenziswa.
Isibaya sezimbuzi sangaphambili senziwe ikamelo lezivakashi elinendawo yalo yokugezela kanye nendlu yangasese kusetshenziswa ukwakhiwa kobumba. Eshabhu sakha ikhishi elincane lekhofi, itiye nezinto ezincane.
Sinikeza izivakashi zethu isidlo sasekuseni esicebile semifino esinemikhiqizo yemvelo evela esifundeni noma engadini yethu, isinkwa esenziwe ekhaya, izithelo ezivela lapha kanye nojamu bokuzenzela.
I-southern Burgenland enhle namagquma ayo aguquguqukayo kanye ne-rambling, expanses engathuthukisiwe ilungele ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngezinyawo nokugibela amabhayisikili. Noma ukuze nje ujabulele imvelo, phumula futhi ufunde endaweni eyimfunda.
Endaweni yethu ebanzi sakhe indlu yengilazi ekhanyayo nekhangayo ngamafasitela amadala neminyango yengilazi, esebenza njengegumbi le-yoga kanye negumbi lokubhucunga. Izivakashi zethu zimenywa ngokufudumele ukuthi zisebenzise leli gumbi lokuphumula.
Njengomuntu oqeqeshiwe we-Shiatsu masseuse kanye nothisha we-yoga onesipiliyoni, ngiyajabula ukunikeza izivakashi zethu amakilasi e-yoga angawodwana (noma imizuzwana nje) noma ukubhucungwa ngesicelo.
'Esitebeleni sezimbuzi', njengoba sibiza ngothando igumbi lethu lezivakashi elihle, kunombhede ongu-1.60 x 2.00 m kanye nombhede usofa ongagoqwa ukuze ube ngu-1.40 x 2.00 m.
Isibaya sezimbuzi sinegumbi laso lokugezela elineshawa nendlu yangasese kanye nethala elincane elinombono wenkundla.
Ukuze kusetshenziswe isistimu yamanzi emvelo ngendlela efanele, sicela izivakashi zethu zilethe izindatshana zenhlanzeko ezibolayo. Izinsipho ezenziwe ngezandla ziyatholakala esizeni.
Siphila impilo yemifino kuphela ngakho-ke sicela izivakashi zethu ukuthi zihloniphe lokhu futhi zingalethi ngempela inyama ekhishini lethu lezivakashi.
Uma uhlala ubusuku obubodwa kuphela, kunemali yokuhlanza engu-€ 5 umuntu ngamunye.
Izindawo zethu zokuhlala zilungele imindeni noma amaqembu abantu abangafika kwabayi-10 abafuna ukuphila ngobulula ndawonye! (Impela, imithetho yamanje yokuvikela i-corona kufanele ibhekwe lapha!)
Izingane ezifika eminyakeni emi-5, inqobo nje uma zingawudingi umbhede wazo, zimahhala futhi azibizi lutho!
Siyajabula futhi ukunikeza isidlo sasemini semifino, i-snack yokuhamba ngezinyawo noma ikhofi yantambama nekhekhe!
Yebo, siyayigcina imithetho esebenzayo yokuvikela i-corona futhi siqinisekisa izivakashi zethu ukuthi zizoyilandela lapho zihlanza noma zithintana nabo mathupha. Sicela futhi izivakashi zethu ukuthi zibambelele kuzo. Kodwa-ke, njengoba siphakathi kwemvelo futhi azikho izindawo ezivamile zasendlini, ubungozi buphansi kakhulu.
Iholide elingenazo inkundla yezokuxhumana liqinisekile lapha kithi, ngokwemvelo iziphazamiso ezinjalo azidingeki ngempela!
Amashabhu ethu obuciko bokuthunga nefenisha avuliwe futhi angavakashelwa!
Sibheke ngabomvu ukuhlangana okuhle!
UGertraud kanye noRolf
Nazi izixhumanisi kwezinye izikhangiso zethu!
(Susa isikhala phakathi kuka-"." Futhi "com")
i-airbnb. com / h / sursursaltamontes
i-airbnb. com / h / surplanwagen
i-airbnb. com / h / surmariposa
UGertraud Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Güssing namaphethelo